Tsy Nihemoran’ny Praiminisitr’i Timor Leste Ny Fitoriany Ireo Mpanao Gazety Roa Ho Nanala Baràka · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 22 Mey 2016 4:42 GMT
Rui Araujo, priminisitr'i Timor Leste, mihaona amin'ireo andiana mpanao gazety nandritry ny fankalazàna ny Andro Erantany Ho An'ny Fahalalahan'ny Asa Fanaovana Gazety, tao Dili renivohitra. Loharano: pejy Facebook-n'ny biraon'ny Praiminisitra ao Timor Leste.
Ny 22 Aprily 2016, marobe ireo vondrona media erantany no nanoratra taratasy iray ho an'i Rui Maria de Arayjo, praiminisitra ao Timor Leste, manainga azy hisintona ny raharaha fanalàna baràka nitoriany mpanao gazety roa ao an-toerana. Herinandro taty aoriana, namaly i Araujo, niaro ny fanapahankeviny hanohy ny raharaha anenjehany ireo mpanangona vaovao.
Azon'ity mpanoratra ity ny dika tamin'ilay taratasin'i Araujo, izay iresahany momba ireo ahiahin'ireo vondrona media erantany. Nolazain'i Araujo fa tsy handefitra mihitsy izy amin'ny ‘gazety tsy mandray andraikitra':
Tsy ho atakaloko mihitsy amin'ny fahalalahan'ny asa fanaovana gazety sy ny fahalalahana maneho hevitra ny ‘gazety tsy mandray andraikitra’ sy ny ‘fahalalahana maneho hevitra tsy mandray andraikitra’.
Ilay taratasy, nosoniavin'ny Kaomity ho Fiarovana ny Mpanao Gazety, Freedom House, Federasiona Iraisampirenen'ireo Mpanao Gazety, sy ny Sendikan'ny Mpanao Gazety ao Azia Atsimo Atsinanana, dia manondro ny raharahan'i Raimundos Oki sy Vicente Martins avy ao amin'ny gazety “Timor Post”. Ny 10 Novambra 2015, namoaka tantara iray miresaka ny filazana kolikoly ao anatin'ny dingana fanaovana tolobidy eo anivon'ny governemanta ny gazety Timor Post. Andro vitsy taorian'izay dia navoakan'ny gazety ny fanitsiana sy valinteny iray avy amin'ny biraon'ny praiminisitra– zo iray arovan'ny lalàna momba ny asa fanaovana gazety ao amin'ny firenena — mifandray amin'ilay tantara.
Saingy Araujo, tsy afa-po tamin'ny famoahana ilay fanitsiana tao anaty gazety, dia nametraka fitoriana momba ny fanalàna baràka anenjehany an'i Oki sy Martins.
Na izany aza, ao anatin'ilay taratasy nomeny ho an'ireo vondrona media erantany, nanamafy i Araujo fa tsy raharaha mahakasika fanalàna baràka miaty heloka bevava akory no nataony, fa fotsiny “fanazavàna ny zavanisy tany amin'ny biraon'ny fampanoavana momba ny fanelezana fiampangàna tsy marina momba ahy teny imasom-bahoaka.”
Nanitrikitrika ihany koa i Araujo fa hoe manana zo izy hanao fitoriana ireo mpanao gazety izay lazainy fa nanao fiampangana tsy marina azy:
Noho ny fahalalahan'ny asa fanaovana gazety sy ny fahalalahana maneho hevitra ve dia afaka manoratra ny mpanao gazety iray ary mamoaka ny karazana tatitra tahaka izany ny gazety?
Nisy mihitsy any tatitra iray an'i Timor Post taminà tafa iray ho an'ny mpanao gazety izay nandàvako ireo fiampangàna diso ireo, ary fialantsiny iray milaza ‘olana ara-teknika’ no navoaka, fa tsy nisy na teny iray aza ‘manitsy’ ireo fiampangàna hita be hoe tsy marim-pototra.
Nampiany koa hoe iantohan'ny Lalàna momba ny fanaovana gazety ao Timor Leste ny zon'ireo mpanao gazety, saingy “tsy ho toy ny fitaovana hamaizana izay hadisoana nataon'ireo mpanao gazety na masoivoho mpamoaka vaovao.”
Dika tamin'ilay fanitsiana navoakan'ny Timor Post tamin'ny 8 Novambra 2015. Sary an'i Raimundos Oki, fampiasàna nahazoana alàlana
Ny 11 Aprily lasa teo, nantsoina hiatrika fakàna am-bavany tany amin'ny biraon'ny fampanoavana ireo roa notoriana. aorian'ny fanadihadiana ilay tranga, nanapaka hevitra ny hanameloka ireo mpanao gazety roa ho nanao ‘fiampangana feno fanendrikendrehana’ ny tao amin'ny fampanoavana.
[…] mino ny fampanoavana fa Raimundos Oki ‘taorian'ny nahazoany io vaovao io, dia tsy nanamarina ny fahamarinan'ny vaovao na nifanatrika tamin'ny voarohirohy mba haka ny heviny momba ny zavamisy.’
[…] Nanao izany izy ho fanohintohinana ny voninahitra, ny anarana sy ny laza tsara mba handratràna an'i Rui de Araujo, tamin'ny fahafantarana tsara fa arovan'ny lalàm-panorenana ny zo tahàka izany ary tsy nifanaraka amin'ny fahamarinana ilay vaovao.
Nalefa taloha kelin'ny fankalazàna ny Andro Erantany Ho An'ny Fahalalahan'ny Asa Fanaovana Gazety ilay taratasy avy amin'ireo vondrona media erantany. Maneho ny ahiahy momba ny fiantraikan'ilay raharahanà fanalàna baràka amin'ny firotsahan'i Timor Leste hiaro ny fahalalahan'ny asan-gazety:
[…] ny fikambanan'ny media iraisampirenena dia sady diso fanantenana no velon'ahiahy tamin'ny fanohizana ny hetsika tahaka izany ary manainga mafy anao mba hisintona tsy misy fepetra ireo vesatra ka hampiato ny fampiasàna fampihorohoroana araka ny lalàna hanaovana antsojay amin'ireo mpanao gazety ao Timor Leste.
[…] io fitoriana an'i Oki sy Martins ho nanàla baraka io dia mandrahona fanozongozonana amin'ny fomba tsy miafina ny fahalalahan'ny asa fanaovana gazety ao Timor Leste, amin'ny fambolena kolontsainan'ny tahotra sy ny fandrahonana eny anivon'ireo mpanao gazety izay mitatitra ireo olana manandanja misy ao amin'ny firenena.
Nitafàn'ity mpanoratra ity ary nanontaniany momba ny raharahany, dia namaly i Oki :
Rehefa tafakatra tamin'ny fanenjehana araka ny lalàna, tsy misy atahorako na kely aza satria vonona handray ny andraikitro aho tamin'izay nataoko, satria efa nekenay sahady ny zavatra rehetra tamin'ny famoahana fanitsiana sy fanomezana azy ny zo hitondra valinkafatra.
Na eo aza io tranga io, Araujo, rehefa niresaka taminà andianà mpanao gazety tamin'ny 3 May teo, nandritry ny fankalazana ny Andro Erantany ho an'ny Fahalalahan'ny Asa Fanaovana Gazety, dia nanamafy ny fiombonan'i Timor Leste amin'ny fanajàna ny fahalalahan'ny asa fanaovana gazety sy ny fahalalahana maneho hevitra.